Kukadzi. 7 akabatanidza zvinyorwa zvitsva kubva kuvanyori vanomwe | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Zvinyorwa, Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Tanga izvi Kukadzi 2020 kusvetuka, ndiko kuti, kune rimwezve zuva rekuverenga. Uye, pasina kuve muenzaniso, pane izvi 7 zvinyorwa zvemashoko izvo zvinobuda mwedzi uno uye ndezvipi chete kubva kune vanyori vechikadzi. Mazita akakwidziridzwa mupanorama seaya e Almudena Grandes kana Donna Leon kujoina avo Ana Lena Rivera (munhu wekare waunoziva pano), Ana Merino (anokunda iyo Nadal Prize), Lorena Franco naMadeleine St. John. Ivo vese vanotiunzira nyaya dzezvose zvandinofarira zvandinoongorora pazasi.
1 Mhondi mumumvuri wako - Ana Lena Rivera
2 Mepu yekuda - Ana Merino
3 Amai vaFrankenstein - Almudena Grandes
4 Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha - Lorena Franco
5 Nemvura iri muhuro mangu - Donna Leon
6 Vasikana muDema - Madeleine St. John
Mhondi mumumvuri wako - Ana Lena Rivera
Gore rapfuura chete, Ana Lena Rivera akandipa iyi hurukuro kwaakataura nesu nezvese zvishoma zvishoma uye yakaunzwa a Gracia San Sebastián, wako wekubiridzira wezvemari. Iye zvino nyaya yako nyowani yabuda. Yakazviita zuva rekupedzisira Ndira 29, asi sezvo ichangobva kuitika, ndinoisanganisira muna Kukadzi. Uye mune iri zita nyowani, Nyasha anobatanidzwa mu kutsakatika kwaImelda, wechidiki wepfungwa iyo yavanowana yakafa mazuva mashoma gare gare munzira dzechitima. Murume wake, Civil Guard bhomba uye mukuru fungidziro, anomukumbira rubatsiro pakuziva mhondi. Saka Nyasha, padhuze ne Rafa miralles, Oviedo Police Commissioner, ichatanga a kuongorora izvo zvichamutora misoro mikuru yeEurope. Dambudziko nderekuti yako yehunyanzvi uye yehupenyu hupenyu haisi kuenda panguva yakanaka.
Mepu yekuda - Ana Merino
Dzazvino anokunda mubairo weNadal Nenhau iyi, munyori Ana Merino anotiudza a nhoroondo yekwaya yakaiswa mutaundi diki uko hupenyu hwevagari vayo hunopindirana. Ikoko, Valeria mudzidzisi wechidiki wechikoro anochengeta hukama hwakavanzika game Tom, zvinotora makore makumi matatu. Uye, panguva imwe chete, Lilian inopera pasina chikonzero chiri pachena apo murume wake ari kune rimwe divi renyika. Izvo zvakare Greg, UN mukadzi uyo anotiza kusafara kwake nekugara a kirabhu yemahosi, kusvikira rimwe zuva aonekwa nenzira yakaipa kwazvo.
Amai vaFrankenstein - Almudena Vakuru
Vakuru vanounza kwatiri iyi nyowani nyowani apo mapaseti evatambi vanobatana nezvazvino mu nhoroondo yakagadzwa muna 1954. Ndipo apo apo chiremba wepfungwa wechidiki Germán Velázquez anodzokera kuSpain kushanda mu chipatara chepfungwa yevakadzi vanobva kuCiempozuelos. Ikoko Germán inosangana zvakare ne Aurora Rodriguez Carballeira, a parricide uyo akamufadza aine gumi nematatu, uye iye zvakare anoziva a mukoti, María Castejón, kwaanokwezva. Asi anomuramba uye Germán anofungidzira kuti anochengeta zvakavanzika zvakawanda.
Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha - Lorena Franco
Iyo nyowani ye Lorraine Franco sign up for fashoni yemazita ane mazita evasipo mavara, vakafa, vakapondwa kana zvakafanana hunhu zvekuti vane zvakawanda kudhonza. Kuti Silvia Blanch, musikana akanaka akafanirwa kubudirira, akanyangarika pasina kana chiratidzo rimwe zuva muzhizha ra2017. Alex mutori wenhau uye anoda kunyora chinyorwa nezvake, saka achaenda kuguta re Montseny kwaigara Silvia uye kwaakashaya pekutangira. Ikoko anoda kutaura nemhuri yake uye munguva pfupi anotanga kuona kuti munhu wese anoita kunge anoziva zvakawanda kupfuura zvaanoonekwa uye kuti havadi kuti ari kuhope.
Nemvura yacho kusvika muhuro - Donna Leon
Inspector Brunetti vadzoka uye naye tinoenda kuVenice zvakare. Muchiitiko chake chegumi nemana, anochidaidza Benedetta Tosso, one kurwara gomarara ndiani anoda kukuudza chimwe chinhu chisingadi kutora kuenda kuguva. Anokwanisa kutaura naye nezvazvo murume wake, Vittorio Fadalto, achangofa mutsaona yemumugwagwa, kubatanidzwa na a raha akawana fomu zvisiri pamutemo uye nekudaro rufu rwake rwaitove a umhondi. Uye inonongedzera kune vane mhosva kuti haichakwanise kunongedza. Brunetti achatanga kuferefeta nyaya iyo inozomutungamira kwaishanda murume uyu, a yakazvimirira kambani mutariri wekutarisa iyo mhando yemvura muVenice. Asi ipapo Brunetti achafanirwa kubata nenyaya ye chiokomuhomwe pakati pevashandi kuvanda inosvibisa zvinoyerera mumvura, chinhu chandaigona kuva nacho mhedzisiro yakaipa mune hutano hweVenetians.
Vasikana vakapfeka zvitema - Madeleine St. John
Madeleine St. John inyanzvi Munyori weAustralia izvo zvinotiunzira iyi nyaya yakaiswa mukati Sydney muna 1950. Iko kune iyo zvitoro zvine mukurumbira yeguta, iyo Goode's, kwaunogona kuwana zvazvino mufashoni. Neapo Vakadzi vana vanoshanda, Lesley, Patty, Fay naMagda, vabatsiri vemuchitoro echikadzi madhirezi chikamu, vanogara vakakwana mumaunifomu avo matema, izvo izvo basa ndiyewo oga mukana wekusununguka. Saka nepo vachipa zano vatengi vavo pamicheka uye mamodheru, ivo vese vane uye vanogovana zviroto zverusununguko, uye zvemabasa akasiyana nekuva vanasikana, vakadzi kana amai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Kukadzi. 7 akabatanidza zvinyorwa zvitsva kubva kuvanyori vanomwe
Zita reMhepo naPatrick Rothfuss